Madaxweynaha France oo shacabkiisa raali gelin siiyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Madaxweynaha France oo shacabkiisa raali gelin siiyey
December 11, 2018 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa caawa oo Isniin ah shacabkiisa kala hadlay warbaahinta isagoo sheegay inuu ka xun yahay mudaharaadka iyo kacdoonka shacabka ay uga soo horjeesteen qorshaha xukuumadiisa ay dooneyso inay sare u qaado canshuurta xili dalkaasi uu ka jiro sicir-barar muddo dheer soo jiitamayey.
Banaanbaxyada hada socda muddo bil ah wadankaasi ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo xaalada amni ee magaalooyinka waaweyn oo ay qeybo kamid ah suuqyada waaweyn ay ka dhaceen boob iyo bililiqo xiligii uu socday mudaharaadka rabshadaha wata.
Kumanaan kun oo shacab ah ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay maalin walba oo sabti ah qabanayey banaanbaxyo iyagoo xirayey wadooyinka waaweyn, dowlada France ayaa la sheegay in banaanbaxyadan ay kasoo gaartay khasaare dhaqaale oo lagu qiyaasay 1.5 bilyan oo dollar.
Xukuumada ayaa todobaadkii hore sheegtay in la joojiyey qorshihii sare loogu qaadayey qiimaha shidaalka gaar ahaan qiimaha naaftada oo ay isticmaalaan inta badan shacabka shaqeeya. Hase yeeshee hakinta qorshahaasi ayaan waxna ka bedalin mudaharaadyada oo sii socday iyadoo shacabka qaarkood codsadeen inuu xilka iska casilo Madaxweyne Macron.
Khudbadii caawa ee Macron ayuu ku sheegay inuu raali gelin siinayo shacabka dhibsaday qorshihiisa iyo hadaladiisa, isagoo ku dhawaaqay qorshayaal cusub oo sare loogu qaadayo mushaharka shaqaalaha iyo canshuur dhimis loo sameenayo dadka dakhliga yar uu soo galo. Walow uu intaasi sii raaciyey in lama huraan ay tahay in dowlada ay dhinto kharashaadkeeda si loo xaliyo sicir bararka iyo dhaqaale xumada dalkaasi ka jirta.